トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Features iyo dhibcood caadiga ah ee naf saaxiibkiisa
In ku cel-reincarnation ah, naf saaxiibkiisa, taas oo uu dhisay xiriir qoto dheer la kulmay wakhti kasta waa dabcan macquul sare oo sidoo kale ka jira dunida this. Waxaan ka qarxay aan la kulmay dad badan oo, laakiin waxa ay u noqon welwelsan tahay in ay jiraan asxaabtiisa naftayda ku sugan.
markii ay ka horyimaadeen saaxiibkiisa naf, ayaa sheegay in wax in la xasuusto dareenka ah in si ka duwan dadka kale. Haddii aadan qabsan sifooyinka of dareen in, waxa ay sidoo kale in iska eafiya iskana saaxiibkiisa qofkaas waa in dhibaato badan la kulmay uu noqon karo.
Sidaas waqtigan, waxaan isku dayay inaan ka mid ah muuqaalada iyo dhibcood caadi ah in ay dareemaan saaxiibkiisa nafta. Haddii aad taas ku xasuusan karto, waxaad yeelan doontaa in ay xumme tahay in la qabto shir naftiinna saaxiibkiisa.
sifooyinka dhibic caadiga ah iyo dareenka of saaxiibkiisa naf? Marka
ayaa sii waday in ay naf saaxiibkiisa iyo is-dhaafsiga, waxaa jira dad badan in ku dhacaa dareenka kala. dareen in ay tahay wax aad dareento in caadi ah markii ay ku kulmeen saaxiibkiisa naf. Aynu eegno waxyaabaha ay.
? dadka taageerada u muuqda marka loo baahdo
tusaale ahaan, la taagan in tub in aad nolosha, waxaad ku dhici kara maxay Fumo oo jidka. waqti, taasina waa waxa dadka taageerada iyo boost ayaa loo baahan yahay. The taageero iyo qofka sameeyay boost ay u badan tahay in ay yihiin ee naf. Dhinaca kale, sida marka uu jiro dhib ma leh wax kasta oo ay sidoo kale si wanaagsan u socda, mararka qaarkood in aan la soo jiidatay loo arko in aysan jirin taageero u baahan naf saaxiibkiisa.
? Marka kulan in ay jiraan
wax naf saaxiibkiisa aad dareento in kulanka ugu horeeya, ama xusuusan dareen ah, sida ay waddaa hadda ka kulanka ugu horeeya ee wareega ah, loo yaqaan ama waxaa jira kuwa iman qodobtay. Sidoo kale, sababtoo ah ma dareemaan sida aan la kulmay markii ugu horeysay, waa mid ka mid ah muuqaalada markii aan la saaxiibkiisa nafta la kulmay. In aan, haddii aan xusuusan dareenka ah in ka duwan wakhtiga si ay ula kulmaan dadka kale, qof si naf saaxiibkiisa. _x00 0D_
? in kastoo in ay jirto ma jirto sabab gaar ah
noqon kartaa nabadda ee maskaxda wada isagoo, nabad bartey ee maskaxda oo waxay yeelan karaan qofka this, waxaan u malaynayaa in aan jeclaan lahaa in aan sii jidka oo dhan waqtigan, waxaan u malaynayaa in sida. saaxiibkiisa Naf A waa lammaane ayaa qaatay waqti isku mid ah marar badan dunidan ka mid ah wakhtiyadii hore ka badan. Sababtan awgeed, sababta waa maanka ku deji oo si wadajir ah isagoo waayo, mar, sidaa darteed waan soo xusuusan dareenka nabadgelyada. Marka erayada
? waxaa qaatay kula
naf saaxiibkiisa in dareen loo arki karaa iyaga oo aan, xitaa haddii ay jirto wax aad laga yaabaa in yimaado iyada oo dareenka dhinaca kale. Maxaa yeelay, waxaad tahay Kizuke xidhiidh qoto dheer oo la xiriirta in midba midka kale waxaa soo jiitay by nafta, erayada aadan u baahnayn. Intaa waxaa dheer, tan iyo markii aad wareejin muhiim ma aha in ay isku dayaan in ay akhriyaan maskaxda iyo miyirka, waxaan leenahay karaa in qaabka dabiiciga ah iyada oo aan macquul aheyn ka.
? fikirrada iyo
ogaanaya haddii weecasho ma dhici karto in tallaabada doono mar walba sidii wada isagoo, waa saaxiibkiisa qofkaas waa in si habsami leh ku qaataan oo aan qaar ka mid ah wavelengths wareejin sabab ah oo dhaqanka ka fikiri karaa in kasta oo kale ah. Marka Do taam Milanello waa dareen waa, dhinaca kale waxay sidoo kale ayaa u maleeyay lahaa. Ama ma on gacanta ku hal, waa in midba midka kale waxaa la dareemay raaxo leh.
qofka noocan oo kale ah waa la yaab leh u dhow waxaa loo kor
, waxaan ku siiyey muuqaalada iyo dhibcood caadi ah in ay dareemaan saaxiibkiisa nafta. Laakiin waxba ka ogeyn ilaa hadda, waxaan u malaynayaa dhinaca kale dareemay in sidaas ma aha in ay leeyihiin in ay xirto oo kaliya waxaa laga yaabaa. In aadan ka maqnaan dareen in, aynu si taxadir leh waxa kobciya xidhiidhka xisbiga kale.
, Sidaas daraaddeed xusuuso dareenka nabadgelyada. Marka erayada
Hands malayn sidaas. Ama ma on gacanta ku hal, waa in midba midka kale waxaa la dareemay raaxo leh.